Jaamacadda Bariga Afrika qaybteeda Gaalkacyo oo loo fariistay imtixaanaadka Simisterka. – Radio Daljir
Jaamacadda Bariga Afrika qaybteeda Gaalkacyo oo loo fariistay imtixaanaadka Simisterka.
Janaayo 13, 2013 3:27 b 0
Gaalkacyo, Jan, 13- Jaamacadda Bariga Afrika faraceeda Gaalkacyo ayaa shalay oo sabti ah waxaa? loo fariistay imtixaanaadka simisterka.
Illaa 250 oo dhigta kuliyadaha Shareecada iyo daraasaadka islaamka,Computer Sciencska iyo Business Administration ayaa si rasmiya imtixaanaadkaasi ugu farsiitay.
Maamulaha jaamacadda Bariga Afrika faraceeda Gaalkacyo Dr, Aaden Maxamed Cigaal ayaa saxaafadda u sheegay in Simisterka hada ardaydu ay ka baxayaan uu ugu soo dhamaaday habsami isla markaana ay u diyaar garoobayaan kan xiga, wuxuuna ardayda u rajeeyay imtixaankooda inuu guul ugu dhamaado.
Ardayda imtixaanka u fariisatay oo isugu jira wiilal iyo gabdho ayaa ku faraxsan inay imtixaan u macuulaamdkii iyo aqoontii mudddada ay soo baranayeen.
Maamulka gobolka Nugaal oo sheegay inay gacan bir ah ku qabanayaan cid walboo khalkhal galisa xasiloonida.
Maamulka degmada Burtinle oo sheegay inay ka hortagayaan dibad bax kastoo aysan ka warqabin.